गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका १ को अध्यक्षमा एमालेका पन्थी निर्वाचित (अपडेट) - fairnepal.net
गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका १ को अध्यक्षमा एमालेका पन्थी निर्वाचित (अपडेट)
FN May 14, 2022	No Comments
गुल्मी । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकमा वडानम्बर १ को अध्यक्षमा नेकपा एमालेका रामप्रसाद पन्थी निर्वाचित भएका हुन् ।
मुख्य निर्वाच्न कार्यालय गुल्मीका अनुसार पन्थीले ४६२ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका रामप्रसाद पन्थीले ४४८ मत प्राप्त गरेका छन् । ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
नगरप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसको अग्रता रहेको छ । वडा नम्बर–२ र ३ को वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । वडानम्बर–२ मा नेपाली कांग्रेसका हिराबहादुर थापा निर्वाचित भएका छन् । थापाले ४८२ मत ल्याएका छन् ।
उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका हिमाल कुँवरले ३९० मत ल्याएका छन् । यो वडामा यो वडामा २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
त्यस्तै नगरको वडा नम्बर–३ मा नेपाली कांग्रेसका बाबुराम खत्री वडाअध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । खत्रीले ५९० मत ल्याएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी ५४८ मत ल्याएका नेकपा एमालेका मानबहादुर घर्ती पराजित भएका छन् ।
मदानेकाे अध्यक्षमा कांग्रेसकाे अग्रता, उपाध्यक्षमा स्वतन्त्र अगाडि
गुल्मीको मदाने गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार महेन्द्रबहादुर कुवँरले अग्रता लिएका छन् । उनी २ सय ८७ मतका साथ अगाडि लम्किरहँदा नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रमेबहादुर केसीले २५४ मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन् ।
उपाध्यक्षमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार राधा रायमाझी केसीले अग्रता लिएकी छन् । उनी २ सय ६४ मतसहित अग्रस्थानमा रहँदा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार बेगमबहादुर चन्दले २ सय ८ मत पाएका छन् ।
एमाले उम्मेदवार ९० मतका साथ तेस्रो स्थानमा छन् ।
स्थानीय चुनावअन्तर्गत सातवटा तहका नतिजा सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक विवरण अनुसार अहिलेसम्म एमालेले ३, कांग्रेसले २ र एकीकृत समाजवादी पार्टीले १ स्थानीय तह जितेका छन् ।
स्थानीय चुनावको मतगणना पनि जारी छ । जारी गणनामा कांग्रेसले ४३ वटा स्थानीय तहमा अग्रता लिएको छ । यस्तै एमालेले ३० तहमा अग्रता लिँदा माओवादी केन्द्रले १३ स्थानीय तहमा अग्रता लिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले १ र राप्रपाले २ स्थानीय तहमा अग्रता लिएको छ ।
एमालेमा धेरै निर्विरोध निर्वाचित (सूचीसहित)
गुल्मी कांग्रेसको अधिवेशन : कुन स्थानीय तहमा कसकाे नेतृत्व ?
कहाँ–कहाँ को-को छन् बागी उम्मेदवार ? (सूचीसहित)
कांग्रेसले जित्यो गुल्मीकाे रेसुङ्गा नगरपालिकाको मेयर र…
बालेनको अग्रता लगातार बढ्दै, एक हजार बढी मतले अघि (ताजा…
बाइस वर्षे युवाले निर्वाचनमा रचेको इतिहास...
Previous Previous post: बुटवलमा कांग्रेसको अग्रता कायमै, एमालेकाे अवस्था दयनीय, कसकाे कति मत (ताजा अपडेट)
Next Next post: मतगणनास्थलमै निगरानी गर्न पुगे बालेन शाह (काठमाडाैं महानगर मतगणना ताजा अपडेट)